Lionel Messi oo Wadahal heshiis kordhin ah la furay Kooxdiisa Barcelona… (Miyuu saxiixayaa heshiis noloshiisa ah?) – Gool FM
(Barcelona) 17 Nof 2019. Lionel Messi ayaa wadahal heshiis kordhin ah kula jira Barcelona sida uu xaqiijiyey agaasimaha ciyaaraha Kooxda reer Spain ee Eric Abidal.
Xiddiga xulka qaranka Argentina ayaa 18-sanadood ku qaatay Barcelona laakiin mustaqbalkiisa ayaa su’aal la galiyey kaddib markii ay soo shaac baxday horraantii sanadkan inuu si xor ah uga tagi karo Garoonka Camp Nou dhammaadka xilli ciyaareed kasta.
Laacibka shanta goor ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ee Lionel Messi ayaa si rasmi ah qandaraas ugula jira kooxda haysata horyaalka La Liga illaa iyo sanadka 2021-ka, laakiin Abidal ayaa ku rajo wayn in heshiis cusub lagala heshiin doono dhawaan.
“Horay ayay u wada hadleen.” ayuu u sheegay Jariiradda Mundo Deportivo isagoo intaa ku daray: “Ma aqaanno haddii aan dhawaan war heleyno sababtoo ah go’aanka wuxuu ku xirnaan doonaa ciyaaryahanka, laakiin annaga ahaan Koox ahaan, waxaan rajeynayaa in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto.”
Markii la weydiiyey goorta uu filayo in heshiiska lagu dhawaaqo Abidal ayaa yiri: “Waxaa la ogaan doonaa waqti la yaqaanno, laakiin anigu waxaan ahay mid dhinaca wanaagsan wax ka eega.”
Bishii la soo dhaafay ayaa laga joogay markii 15-sanadood ka hor uu Lionel Messi u saftay Barcelona kulankiisii ugu horreeyey isagoo jiray da’da 17-sano, tan iyo markaas waxa uu u dhaliyey 600 oo gool 698 kulan oo uu u saftay isagoo kula guuleystay 34 koob oo ay ku jiraan 10 horyaalka La Liga, afar UEFA Champions League iyo Lix Copa del Rey.
Waxa uu heshiiskiisa kordhiyey siddeed jeer tan iyo sanadkii 2005, qandaraaskiisii ugu dambeeyey kooxda ayuuna saxiixay bishii November sanadkii 2017-kii, markaasoo laga dhigay ciyaaryahanka ugu mushaharka badan horyaalka La Liga isagoo isbuucii jeebka loo geliyey lacag dhan 580,000 oo euro.
Si kastaba aha ahaatee, waxaa laga yaabaa in Kabtanka xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi inuu heshiis noloshiisa ah u saxiixo kooxdiisa Barcelona haddii la isku afgarto sida ay sheegayaan qaar ka mid ah Warbaahinta Spain.